Indlela yokulinganisa i-Redox Reaction kwisisombululo esisisiseko
Ukulinganisa i-Redox Ukuphendula kwisisombululo esisisiseko Umzekelo
I-Half-Reaction Method kwisisombululo esisisiseko
Ukuphendula kwe-Redox ngokuqhelekileyo kwenzeka kwiisombululo ezinamandla. Oku kungenziwa ngokulula nje kwizicwangciso zesisiseko. Lo mzekelo ingxaki ibonisa indlela yokulinganisela ukuphendulwa kwe-redox kwisisombululo esisisiseko.
Ukuphendulwa kwe-Redox kulungelelaniso kwizicwangciso zesisombululo usebenzisa indlela efanayo yokuphendulela ebonakaliswe kumzekelo weengxaki " Ukulinganisa Umzekelo weRoxox Reaction Example ". Isishwankathelo:
Ukuchonga i- oxidation kunye nokunciphisa izixhobo zokuphendula.
Ukwahlula indlela yokusabela ngayo kwi-oxidation-half reaction reaction kunye nokunciphisa isigidi-mpendulo.
Ukulinganisa isicatshulwa ngasinye sesahlulo sesibini kunye nekhompyutheni.
Ukulinganisa ukudluliselwa kwe-electron phakathi kwe-oxidation kunye nokunciphisa i-equation equation.
Phinda uthathe i-half-reaction to form a redox reaction .
Oku kuya kulungelelanisa indlela yokusabela kwisisombululo esisisigxina , apho kukho i-H + ions ezingaphezulu. Kwizisombululo ezisisiseko, kukho i-OH - ions ezingaphezulu. Ukuphendula ngokulinganisela kufuneka kuguqulwe ukuze kususwe ii-i + ioni kunye nokuquka ii-OH.
Ukulinganisa ukuphendula okulandelayo kwisisombululo esisisiseko :
I-Cu (s) + HNO 3 (aq) → I-Cu 2+ (aq) + Hayi (g)
Ukulinganisa i-equation usebenzisa indlela yokuphendulwa kwesigamu esichazwe kwi- Balance Redox Reaction Model . Le mpendulo iyinto efanayo eyasetyenziswa kumzekelo kodwa yayingqinelana nendawo engummangaliso. Umzekelo ubonise ukulingana okulinganayo kwisisombululo esiyi-acidic:
3 Cu + 2 HNO 3 + 6 H + → 3 Cu 2+ + 2 Hayi + 4 H 2 O
Kukho i iI + zeesithandathu zokususa.
Oku kufezwa ngokungongeza inani elifanayo le-OH - ions kumacala omabini alinganayo. Kule meko, yongeza 6 OH - kumacala omabini. 3 Cu + 2 HNO 3 + 6 H + + 6 OH - → 3 Cu 2+ + 2 Hayi + 4 H 2 O + 6 OH -
I-H + ions kunye ne-OH-inhlanganisela ukwenza i- molecule yamanzi (HOH okanye H 2 O). Kule meko, i-6 H 2 O yenziwe kwinqanaba le- reactant .
3 Cu + 2 HNO 3 + 6 H 2 O → 3 Cu 2+ + 2 Hayi + 4 H 2 O + 6 OH -
Ukurhoxisa ama-molecule yamanzi angaphandle. Kule meko, susa 4 H 2 O ukusuka kumacala amabini.
3 Cu + 2 HNO 3 + 2 H 2 O → 3 Cu 2+ + 2 Hayi + 6 OH -
Impendulo isingqinisiso kwisisombululo esisisiseko.
Yintoni i-Chemical Chemical?
Iimpawu zeMiyane eziMnyama
Indlela yokuguqula iiMitha zeCubic kwiiCubic Feet
Iimpawu zeeMetriki zeeMetric
Ukuguqula i-Atmospheres ukuya kumaPounds nge-inch square okanye i-PSI
Iingoma ezigqwesileyo zikaVicente Fernandez
Isingeniso kwiTestamente Entsha
5 Abalawuli ababenqwenela ukwenza iifayile zabo kwi-Hit
Imimangaliso kaYesu: UMoya oyiNgcwele ubonakala njengeNkuba ngexesha lokubhaptizwa kukaKristu
Ngaba Zikhona Iinkonzo Zingakholelwa KuThixo?
I-American College Dance Dance
20 Iimpawu zeKrismesi zokwenza uzive njenge-Kid
Intaba Everest: Intaba ephakamileyo kunazo zonke kwihlabathi
Kutheni iWipers My Smearing?
I-Hypothesis ye-Null Inkcazo kunye nemizekelo
Indlela yokwenza i-Gallium Beering Heart Demonstration